बिहीबारका दिन बृहस्पतिको पूजा गर्नाले हुन्छन् यस्ता लाभ
Homeसमाचारबिहीबारका दिन बृहस्पतिको पूजा गर्नाले हुन्छन् यस्ता लाभ
October 15, 2020 admin समाचार 8916
हरेक बार मानिस’हरुले विभिन्न देवी देवता’हरुको पूजा अर्चना गर्ने गर्छन् । बार अनुसार नै भगवा’नको पूजा गर्नाले मनो’कांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
बिहीबार देवता’का गुरु बृहस्प’ति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको लागि स’मर्पित छ । यो दिन व्रत बस्ना’ले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ । पहेलो रंगको कपडा ल’गाउने र पहेलै वस्तु’को दान गरेमा शु’भ मिल्नेछ । साथै, यो दिन विष्णु’की पत्नी लक्ष्मी’को पनि पूजा गरिन्छ ।
सनातन धर्मको मान्य’ताअनुसार ३३ करो’ड देवी–देवता छन् । यी सबै देवी–दे’वताको पूजा एकसा’थ गर्न सम्भव पनि छैन । त्यसैले हरेक बारको आफ्नै महत्व रहिआ’एको छ । यद्यपि, कुनै–कुनै दिनमा भने विशेष देवी–दे’वताको पूजाअ’र्चना गर्दा सांसारिक काम’ना पूरा हुने जन’विश्वास छ ।
त्यसाे त राशिचक्र अनु’सार धनु र मीन रा’शिका स्वामी पनि बृहस्प’तिलाई नै मानिन्छ । ज्ञान र बुद्धिका दाता समेत मानिन्छ । त्यसैले बिही’बारका दिन बृहस्प’तिको पूजा गरिन्छ । -खबरहब बाट
घट्यो सुनको मूल्य, आज तोलाको कतिमा कारोबार भइरहेको छ ?
विवाहपछि युवतीमा किन आउँछ यस्तो परिवर्तन जान्नुहोस्
September 15, 2020 admin समाचार 11991
सुनको मूल्य घट्यो…आज तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस
August 23, 2020 admin समाचार 18659
नेपाली बजा’रमा सुनचाँदी’को भाउमा सामान्य गिरावट आएको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा तोलामा चार सय रुपैयाँले गिरावट आएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यव’सायी महासंघले आइत’बारका लागि छापावाल सुन तोलाको ९८ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम
पूर्वरानी कोमल र झलनाथ खनालको स्वास्थ्यको पछिल्लो अवस्थाबारे अस्पतालले दियो यस्तो जा’नकारी
May 2, 2021 admin समाचार 3616
कोरोना पुष्टि भएर नर्भिक अस्प’ताल भर्ना भएका पूर्वरानी कोमल शाह र एमाले नेता झल’नाथ खनालको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा राम्रो समाचार प्राप्त भएको छ । दुवै जनाको स्वास्थ्य अ’वस्था सामान्य रहेको अस्पताल स्रोतले जा’नकारी दिएको छ
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (222757)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (214751)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214430)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (212760)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211629)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210609)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209195)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209079)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194993)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177758)